Mila amakiana ady ny fahalovana… | NewsMada
Mila amakiana ady ny fahalovana…
Par Taratra sur 11/06/2019
Vita iny Pentekosta… Samy nanao izay efany sy afany ny tsirairay, ny fianakaviana, ny fikambanana… Fisentoana kely. Nefa mba misy tokoa ve ny fiovana anaty, raha eo tokoa ny hoe fandraisana na fampitombona ny Fanahy Masina ao amin’ny tena? Mila fiovana sy fanovana izao fiainana izao. Ny tsirairay ihany no antony.
Mby aiza, ohatra, ny fandriampahalemana, raha tsy hiteny afa-tsy izay? Izay ny tena mampikaikaika ny maro izay ela izay, ankoatra ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa, ny fandrobana sy ny hosoka amin’ny fananan-tany, ny fanjakazakan’ny vahiny amin’ny harem-pirenena, ny fahapotehan’ny tontolo iainana amin’izany…
Mahavalalanina, ohatra, ny hoe 36 ny zandary naiditra am-ponja noho ny tsikombakomba amin’ny dahalo, ny famonoana na fampijaliana olona, ny fandikan-dalàna, ny fanaovana kolikoly, ny fidirana amin’ny fakana ankeriny… Izay natao hiaro indray no mamono? Na izay hoe fitaratra amin’ny fanarahan-dalàna no manao heloka…
Izay no nahampahazo vahana ny gaboraraka sy ny baranahiny hatramin’izay? Nampisy sy nampanjakazaka ny tsimatimanota, ny lehibe tsy meloka… Santionany ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa saika mahahenika ny sehatra sy ambaratonga rehetra ny fahalovana. Aiza ho aiza amin’izany ity hoe tany sy fanjakana tan-dalàna?
Mila amakiana ady amin’izay amin’ity hoe fiovana sy fanovana? Ady fiady… Eo, ohatra, ny amin’ny fandrobana sy ny halatra tany etsy sy eroa, anjakan’ny mpanao kolikoly. Miara-dalana amin’ny fandrobana harem-pirenena, saika anjakan’ny vahiny. Hatramin’ny harena an-dranomasina fa tsy ny an-kibon’ny tany ihany…
Ny hazo no tapaka, ny sampany no miandany amin’ny vy. Tsy aiza ny takatra mihinana ny valala fa ao ihany, na ny vano mitsaingoka ny sahona. Ny an’ny zandary izao vaky bantsilana izao. Ahoana kosa ny sehatra hafa: fitsarana, fadintseranana, fitantanam-bolam-panjakana, fampianarana, fananan-tany, fahasalamana… ? Ady fiady, mila vakina.